LibertyCoin စျေး - အွန်လိုင်း XLB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို LibertyCoin (XLB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ LibertyCoin (XLB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ LibertyCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XLB – LibertyCoin
Market ကဦးထုပ်: $31.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ LibertyCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
LibertyCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
LibertyCoinXLB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.11LibertyCoinXLB သို့ ယူရိုEUR€0.944LibertyCoinXLB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.853LibertyCoinXLB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.02LibertyCoinXLB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr10.13LibertyCoinXLB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.7.03LibertyCoinXLB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč24.66LibertyCoinXLB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.15LibertyCoinXLB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.48LibertyCoinXLB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.56LibertyCoinXLB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$25.32LibertyCoinXLB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$8.64LibertyCoinXLB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.89LibertyCoinXLB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹83.6LibertyCoinXLB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.185.87LibertyCoinXLB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.53LibertyCoinXLB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.68LibertyCoinXLB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿34.59LibertyCoinXLB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥7.77LibertyCoinXLB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥117.73LibertyCoinXLB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1329.57LibertyCoinXLB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦422.89LibertyCoinXLB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽81.96LibertyCoinXLB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴30.96
LibertyCoinXLB သို့ BitcoinBTC0.0001 LibertyCoinXLB သို့ EthereumETH0.00287 LibertyCoinXLB သို့ LitecoinLTC0.0193 LibertyCoinXLB သို့ DigitalCashDASH0.0129 LibertyCoinXLB သို့ MoneroXMR0.0129 LibertyCoinXLB သို့ NxtNXT92.53 LibertyCoinXLB သို့ Ethereum ClassicETC0.156 LibertyCoinXLB သို့ DogecoinDOGE330.04 LibertyCoinXLB သို့ ZCashZEC0.0135 LibertyCoinXLB သို့ BitsharesBTS43.05 LibertyCoinXLB သို့ DigiByteDGB42.66 LibertyCoinXLB သို့ RippleXRP3.73 LibertyCoinXLB သို့ BitcoinDarkBTCD0.0394 LibertyCoinXLB သို့ PeerCoinPPC3.98 LibertyCoinXLB သို့ CraigsCoinCRAIG521.15 LibertyCoinXLB သို့ BitstakeXBS48.77 LibertyCoinXLB သို့ PayCoinXPY19.97 LibertyCoinXLB သို့ ProsperCoinPRC143.5 LibertyCoinXLB သို့ YbCoinYBC0.000615 LibertyCoinXLB သို့ DarkKushDANK366.74 LibertyCoinXLB သို့ GiveCoinGIVE2475.34 LibertyCoinXLB သို့ KoboCoinKOBO260.57 LibertyCoinXLB သို့ DarkTokenDT1.03 LibertyCoinXLB သို့ CETUS CoinCETI3300.47
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 20:05:02 +0000.